LG G3 ကအောင်မြင်ခဲ့တာလား။ | Androidsis
LG G3 ကအောင်မြင်ခဲ့တာလား။
လူများစွာအတွက်၎င်းသည်ယခုနှစ်မျှော်မှန်းထားသည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။ The LG က G3 ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Androidsis တွင်ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးသားတင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သူကသူကိုဂရုမစိုက်တော့ဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်လာခါစလူသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေသေးလို့ပဲ။ နှင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အထူးသဖြင့်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားသောသူတို့အဘို့, ငါတို့ကထုတ်လုပ်သူအားဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အောင်မြင်မှုရှိမရှိသို့မဟုတ်မခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်တယ်။ LG နှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းများကိုချစ်မြတ်နိုးသူများမှာသေချာသည်မှာသေချာသည်။ သို့သော် terminal ၏အချို့သောရှုထောင့်များမှယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိသောသုံးစွဲသူများရှိနေသေးသည်။
LG G3 အမှု၌အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့ပြောစရာများစွာရှိသည်။ နှင့်မကောင်းတဲ့ထက်ပိုကောင်းသော။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရှိခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းတွင်သူတို့သည်သုံးစွဲသူများတောင်းဆိုသည့်အရာများနှင့်ပြိုင်ဘက်များတောင်းဆိုသည့်အရာနှင့်အတော်လေးမှန်ကန်ခဲ့သည်။ ကင်မရာသည်မည်သူမျှယခင်ကထည့်သွင်းရန်မစဉ်းစားဖူးသည့်လေဆာအာရုံခံကိရိယာနှင့်ပိုနှစ်သက်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာအားနည်းနေပြီးဝေဖန်မှုအများဆုံးခံရသူများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ပလပ်စတစ်အဖုံး၏အချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းမှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြေရှိသည်။ သင်ဘာပြောမလဲ? ¿LG G3 ကအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ရင်ငါတို့နဲ့အတူရှာဖွေပါ?
1 ဝေဖန်မှုများနှင့်အတူတစ် ဦး ကအံ့မခန်းဒီဇိုင်း
ဝေဖန်မှုများနှင့်အတူတစ် ဦး ကအံ့မခန်းဒီဇိုင်း
LG G3 ၏ဒီဇိုင်းသည်ပြန်လည်ပတ်မှုအသစ်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ဘယ်ကလာသည်ကိုမေ့သွားကြသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းသည်မြင်ကွင်းအပြည့်အ ၀ ဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာလူများစွာအတွက်၎င်းသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်အလှဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ HTC One M8 နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုများမှာမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းပြောင်မြောက်သောအချောသတ်မှုများပင်တင်ဆက်ပြီးနောက်ပထမမိနစ်အတွင်းကျွမ်းကျင်သူအများစုကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ ¿၎င်းသည် LG G3 သတ္တုဖြစ်သည်? အရာအားလုံးဟုတ်ကဲ့ညွှန်ပြ။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်အတုသည်လုံးလုံးလျားလျားထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်ပိုလီကာဗွန်နိတ်ပြီးသွားပြီဟူသောဝေဖန်မှုများမှာမလုံလောက်ပါ။
ငါကအရမ်းတုပပေမဲ့လှပတဲ့ပလပ်စတစ်ပဲ။ ပထမ ဦး စွာဤကဲ့သို့နိမ့်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုရရန်ဤပစ္စည်းကိုလောင်းခြင်း မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သတ္တုကိုသာရွေးချယ်ပါက LG G3 ၏ရောင်းဈေးမှာပုံမှန်ထက်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပိုများလိမ့်မည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကဆိုကြသည်။ အရမ်းစျေးကြီးတယ် ထိုအမှုကိုမြင်လျှင် သူတို့သည် churros ကဲ့သို့ရောင်းကြသည်ငါထင်တာကတော့အဆုံးမှာတော့ဒီဟာကတောင်သူတို့ဟာအမှတ်အသားကိုရောက်သွားတယ်။
အမှန်တရားမှာ၎င်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကိုအများဆုံးဖမ်းယူသောအရာဖြစ်သည် LG G3 ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ ဒီဖုန်းကမုသားကိုပြပြီးပြီဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့ဖန်သားပြင်နဲ့ကင်မရာပေါ်မှာပါ။ အဓိကပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် screen သည် resolution အရအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကင်မရာအရပြသထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကလေဆာအာရုံစိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအရာများရှိပြီးအရင်ကဘယ်သူမှအာရုံမစိုက်ခဲ့သည့်အပြင်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံလောကတွင်အရာရာကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
အဆိုပါပေမယ့် LG G3 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်၎င်းတွင်အခြားမည်သည့်တီထွင်မှုမျိုးမှမပါရှိသည့်အပြင်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အချိန်တွင်သူတို့အဆိုပြုထားသောအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လက်ရှိအကွာအဝေးရှိဘားကိုလျှော့ချရန်မကြိုးစားခဲ့ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခါတစ်ရံစျေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းသည်ဖောက်သည်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်အမြင်ကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကဤအပိုင်းကိုပင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများတွင်ဖြောင့်မတ်နိုင်သည်။
တိုတိုပြောရရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် LG G3 သည်စည်းမျဉ်းတိုင်းတွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ မင်းဘယ်လိုမြင်လဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 ကအောင်မြင်ခဲ့တာလား။
Android ပြproblemsနာများ? Safe mode ထဲဝင်ပြီးဖြေရှင်းပါ
Angry Birds Stella သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်